डाउनलोड बटन काम गरिरहेको छैन
डाउनलोड बटन काम गरिरहेको छैन 1 वर्ष2महिना पहिले #1396
डाउनलोड बटनहरू काम गरिरहेका छैनन्।
डाउनलोड बटन काम गरिरहेको छैन 1 वर्ष2महिना पहिले #1398
के तपाई इन्टरनेट ब्राउजर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईंले हामीलाई कुनै जानकारी दिनुभएन भने हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ।
डाउनलोड बटन काम गरिरहेको छैन 1 वर्ष2महिना पहिले #1399
डाउनलोड बटन काम गरिरहेको छैन 1 वर्ष2महिना पहिले #1400
त्यसैले तपाइँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहुन्छ के हुन्छ? त्यहाँ सानो विन्डो खोलिएको छ?
डाउनलोड बटन काम गरिरहेको छैन 1 वर्ष2महिना पहिले #1401
केहि पनि छैन। कुनै अन्य विन्डो छैन, केहि छैन। डाउनलोड गर्नु अघि, तर हालै यो समस्या भएको छ। निश्चित छैन यदि यो फायरफक्समा अद्यावधिकको कारण थियो, वा के।
डाउनलोड बटन काम गरिरहेको छैन 1 वर्ष2महिना पहिले #1403
मैले भर्खरै फायरफक्सको एक संस्करणको साथ परीक्षण गरें र यो राम्रो थियो, सञ्झ्याल पपअप भयो। सायद तपाईले जाँच गर्नु पर्दछ कि कुनै स्प्याम वा स्प्याम ब्लक डाउनलोड विण्डो ब्लक गर्ने छैन। क्रोमसँग पनि प्रयास गर्नुहोस्, यदि यो क्रोमसँग काम गर्दछ भने यो सम्भवतः फायरफक्सको साथ समस्या।
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.248 सेकेन्ड